TRCN Anabatala Ndị Gụchara Akwụkwọ Na Unizik N'Ọrụ Nkụzi
Otu ahụ na-ahụ maka idebanye aha ndị nkụzi n'akwụkwọ n'ala anyị, a kpọrọ "Teacher's Registration Council of Nigeria" (TRCN) n'asụsụ bekee, anabatala ma guzobe ihe ruru mmadụ narị atọ n'ọnụ ọgụgụ n'ọrụ nkụzi, bụkwa ndị gụchara akwụkwọ nso nso a site na ngalaba mmụta nke mahadum Nnamdị Azikiwe dị n'Ọka.
Ka ọ na-eme mmemme nnabata ahụ na idu ndị ahụ n'iyi ọrụ, onye rejistịra nke otu ahụ n'ala anyị, bụ ọkammụta Josiah Ajiboye kọwara ọrụ nkụzi dịka ọrụ pụrụ iche na nke e kwesiri ịkpachapụrụ anya, ma mee ka a mara na oge agaala mgbe a na-ewe ndị amaghị nke ekwe na-akụ, maọbụ ndị adịgboloja n'ọrụ nkụz. Ọ kọwara ndị nkụzi dịka ndị mwulite obodo, ndị nwere ntụnye pụrụ iche maka uto, ọganihu, na ọdịnihu nke ala anyị, ma kọwaa na o kwesiri kaṅe guzosie ha ike ma kwadobe ha nke ọma maka ya bụ ọrụ chere ha n'ihu.
Na ntụnye nke ya, onye kọmishiọna na-ahụ maka agụm akwụkwọ na steeti Anambra, bụ ọkammụta Kate Omenụgha dụrụ ndị ahụ ka ha jigidesie ezi ụkpụrụ ahụ e jiri mara ndị nkụzi. O kwuru na ọrụ nkụzi bụ ihe a na-ehi asaa naabụ n'anya were apụta.
N'okwu ya, onyeisi ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdị Azikiwe dị n'Ọka, bụ ọkammụta Joseph Ahaneku, nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya na n'ihe gbasaara ọmụmụ, bụ ọkammụta Charles Esimone, gwara ndị ahụ ka ha gosipụta ihe ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ ahụ ma tinyekwa ha n'ọrụ iji wee wụlite Naịjiria ka mma.
N'akụkụ nke ya, onyeisi isi ngalaba mmụta n'ụlọ akwụkwọ ahụ, bụ Nkechi Esomonu dụkwara ha ọdụ ka ha gbaa mbọ were akụrụngwa e nyere ha na ihe ndị ọzọ e ji akwalite ọnọdụ nkụzi wee kwadobe onwe ha nke ọma iji wee bụrụ ihe nlere anya na nnọchite anya ọrụ nkụzi n'ebe ọbụla ha hụtara onwe ha.